IINGCAMANGO EZIPHEZULU EZINGAMA-50 ZOGCINO LWANGAPHANTSI-UKUGCINWA KWEKHAYA KUNYE NOYILO - UYILO LWEKHAYA
Iingcamango eziPhezulu ezingama-50 zoGcino lwangaphantsi-ukuGcinwa kweKhaya kunye noYilo
Musa ukuvumela indawo yakho yangaphantsi ukuba ichithe. Kungenxa yokuba ayisiyindawo egqityiweyo oko akuthethi ukuba awungekhe wenze okungcono kuyo.
Nokuba ugqityiwe okanye awugqitywanga, isiseko sakho yindawo yokugcina yendalo. Ezi ndawo zinamagumbi zinokubamba izinto ezahlukeneyo, ukusuka ukugcinwa kwebhayisikile ukuya kwimpahla yexesha kwiwayini. Nangona kunjalo, amagumbi angaphantsi anokuba nemicimbi yokufuma okanye iingxaki zolawulo lwezinambuzane. Ngenxa yale nto, indawo engezantsi komhlaba ayilungelanga zonke iintlobo zokugcina ikhaya.
Ukugcina indawo engaphantsi ngokufanelekileyo kufuna ukusebenzisa uhlobo lwekhonteyina kunye neeshelfu. Imigqomo yeplastiki engena moya ilungele ukugcina izinto zexabiso ezonakaliswe lula ezinokuthi zibulawe ngumngundo okanye zizitshabalalisi kwigumbi elingaphantsi elingagqitywanga. Ukugcina imigqomo ezishelfini kuyanceda ekupheliseni umngcipheko wokonakaliswa kwamanzi ukuba igumbi elingaphantsi belizakukhukula. Khumbula ukuba nokuba igumbi lakho elingaphantsi alikaze likhukhuleke ngaphambili, uqhwithela olunamandla lungakubamba ungalindelanga.
Imicimbi ethile iyavela xa kugcinwa izinto kumagumbi okugqibela agqityiweyo, kodwa ukucwangcisa ngobulumko kunokunceda ukuthintela uninzi lwazo. Amagunjana angaphantsi, amakhethini, kunye neekhabhathi zibonelela ngendawo yokufaka izinto ezongezelelweyo ngaphandle kwamehlo. Ukudala indawo yokugcina engaphantsi kunokunceda ukhulule indawo ekhayeni lakho nasegaraji. Jonga ezi mbono zilandelayo zangaphantsi zokugcina kwaye ufumane ugqozi lokuhlaziya isiseko sakho kwindawo yokugcina efanelekileyo.
1. Amagumbi angaphantsi okuGcina ukuTya
Umgangatho ongaphantsi ngokubanzi akukhuthazwa ukuba kugcinwe ukutya nesiselo. Kungenxa yokuba iindawo zokugcina kwigumbi elingaphantsi zihlala zithambekele ekutshintsheni kweqondo lobushushu, ukungunda, ukungunda, kunye nezinambuzane. Nangona kunjalo, inokuba yindawo elungileyo yokugcina iwayini, iimpahla ezinamathanga, kunye neengcambu zemifuno. Ikwayindawo elungileyo yokwenza ipryry yokutya engxamisekileyo.
Umthombo: @perfectlydestressed nge-Instagram
Isinxibo seHalloween esilula samadoda
Ukutya okungxamisekileyo kokutya yinto efanelekileyo kwiintsapho ezininzi, ngakumbi abo bahlala kwiindawo ezinesimo sezulu esingxamisekileyo. Abanye banokufuna ukugcina ukutya kwimeko yeengxaki kodwa baswele okongeziweyo Ikhitshi lekhitshi indawo yokugcina ukuyigcina. Ukugcina unikezelo lokutya olukhuselekileyo kukusetyenziswa kakuhle kwendawo yokugcina engaphantsi eyongezelelweyo. Ngenxa yobushushu obupholileyo, igumbi elingaphantsi lenza indawo yokugcina ukutya engcono kunegaraji.
Ishelfu evulekileyo yentsimbi ilungile xa ubeka izimbiza zekhaya ezinqatyisiweyo okanye ukutya okuthengisiweyo okugciniweyo. Sebenzisa iiplastiki okanye iikreyiti zokhuni ukubamba izinto ezincinci, ezinje ngezikhongozeli zesipayisi kunye neepakethi zokutya okwenziwe ngumkhenkce. Izikhongozeli zeplastiki ezingafihliyo zikunceda ubone okungaphakathi, kodwa eziqinileyo zikugcina ekongezeni kwigumbi elingaphantsi lendalo ebonakalayo.
Isisele esidala seengcambu sinokwandisa ubomi beetapile, amatswele, amathanga, iiapile, kunye nezinye iziqhamo nemifuno eqinileyo. Olu hlobo lwendawo yokugcina kufuneka lupholile-kufanelekile, phakathi kwama-32 nama-40 degrees Fahrenheit. Ukungenisa umoya kufuneka kwigumbi lokugcina kwigumbi elingaphantsi kwigumbi elingaphantsi, njengoko igesi ye-ethylene evela kwimveliso ethile inokubangela ukuba ezinye iziqhamo kunye nemifuno yonakalise.
Ngokufanelekileyo, isisele seengcambu kufuneka sibe yindawo emnyama, eyahlulwe nakweyiphi na indawo yokugcina ukutya engaphantsi. Nokuba imveliso eyomeleleyo ifuna ukufuma ukuze ihlale ihlaziyekile, kodwa amanqanaba afunwayo anokurusa iinkonkxa kunye neziciko zejagi. Ukugcinwa kweenkuni akuyi kuba nomhlwa, kodwa iyunithi yokugcina iplastiki iya kusebenza ekugcineni ukutya, nayo.
2. UkuGcinwa kwezixhobo zezeMidlalo noLonwabo
Iintsapho ezininzi zifuna izimvo zokugcina kwigumbi elingaphantsi kwezemidlalo kunye nezixhobo zolonwabo. Ingamangalisa into yokuba abantwana badinga izixhobo xa bethatha inxaxheba kwimisebenzi emininzi. Ukugcinwa kwigumbi elingaphantsi kululungele olu hlobo lwezixhobo, kuba uninzi lwazo sele lukhona iqondo lobushushu kunye nokunganyangeki kokufuma. Ukulungiselela, gcina izixhobo zeli xesha kwigaraji, kwaye ugcine izinto zexesha langaphandle kwigumbi elingaphantsi.
Umthombo: @ oboingo13 nge-Instagram
Umthombo: @everyday_order nge-Instagram
Ukugcinwa kwezixhobo zemidlalo kulungile ekusebenziseni indawo eyongezelelweyo kwiindonga zakho ezingaphantsi. Hlanganisa iihaksi ezantsi kwizitepsi ezisezantsi, apho kulula khona ukuthumela abantwana ezantsi ukuya kubamba ubhaka, isigcina-ntloko sebhayisikile, okanye iracquet yerennis. Sebenzisa indawo yomgangatho phantsi kwamagwegwe ngokubeka isitulo sokugcina kule ndawo. Ingaphindeka kabini njengokuhlala ukubeka izihlangu kwaye ibambe neebhasikithi ezigcwele iibhola kunye nezinye izixhobo zemidlalo.
Izimvo zokugcina izihlangu zemidlalo zihlala zisebenza kakuhle kumagumbi angaphantsi. Iyunithi yeeshelfu inokubamba ukucoceka kosapho, izihlangu ezibalekayo, iibhutsi zokunyuka intaba, kunye neebhutsi zemvula. Ukuba unegumbi elikhulu lokuhlambela elingaphantsi, linokuphinda kabini njengendawo yokugcina izinto zangaphandle zasehlotyeni. Hlanganisa ishelufu ngokukodwa ukugcina iithoyi zamanzi, izixhobo ezidadayo kunye nemidlalo yengca.
Ukugcinwa kweerack okugcinwe eludongeni kulungile ukugcina izinto ezinkulu, ezinje ngeebhayisikile kunye neskis, kumgangatho ongaphantsi. Ukuba ukhetha isisombululo sokugcina kwigumbi elingaphantsi, ungafaka inkqubo ye-pulley ukukunceda ufumane izinto phantsi. I-pulley iya kwenza ukuba ugcine izinto yonke indlela ukuya phezulu eluphahleni.
3. Izimvo zoGcino lweBhini engaphantsi
Umgqomo weplastiki ongenawo moya sisisombululo sokugcina esisezantsi. Ezi zixhobo zokugcina ziluncedo ziza ngobukhulu obahlukeneyo ukuze ziqulathe zonke izimvo zombutho ongaphantsi. Ukuba uthenga imigqomo yokugcina engqindilili neyomeleleyo, kusenokungafuneki nokuba uyibeke ezishelfini. Ungazibeka nje phantsi kwezitepsi ezisezantsi okanye ecaleni kodonga olungaphantsi.
Umthombo: @organizewithtracy nge-Instagram
Umthombo: @ashleyjoneshatcher nge-Instagram
Umthombo: @neatlydonekc nge-Instagram
Umthombo: @organize_everything nge-Instagram
Umthombo: @azhouseoforder nge-Instagram
Umthombo: @bluehouseyellowdoorut nge-Instagram
Umthombo: @ then.we.were.six nge-Instagram
Umthombo: @simplyblessedjourney nge-Instagram
uyilo lwe tattoo kunye nokakayi
Umthombo: @simplyorganizedwithtina nge-Instagram
Ukwenza umbala-ukufaka iikhowudi kwimigqomo yakho yokugcina engaphantsi kunceda ufumane izinto zakho ngokukhawuleza. Umzekelo, gcina imihombiso yeKrisimesi kwimigqomo ebomvu neluhlaza, uhombiso lweHalloween kwimigqomo yeorenji, nakwizinto zasentwasahlobo kwizikhongozeli ezimthubi.
Ukucoca imigqomo yeplastiki yenye yezona ndlela zintle zokugcina izimvo kumagumbi angaphantsi. Bhala i-bin nganye ngokucacileyo ukukunceda ufumane oko ukufunayo. Ukuphawula i-bin nganye kuyafuneka ukuba ukhetha ukugcina yonke into kwizikhongozeli ezimnyama okanye ezimhlophe. Ngelixa ukufaka iikhowudi kwimibala kwenza kube lula ukufumana izinto ngokukhawuleza, kujongeka kulungile ukusebenzisa umbala omnye kuyo yonke imigqomo yakho yokugcina.
Iibhokisi zekhadibhodi kunqabile ukuba lube luhlobo olulungileyo lombutho ongaphantsi ngaphandle kokuba uzibeke ngaphakathi kwiplastikhi yomoya engenanto okanye ibin. I-Roaches kunye nezinye izinambuzane ziyakonwabela ukuhlafuna kwikhadibhodi kwaye zingonakalisa nantoni na engaphakathi. Ukuba ugcina iiragi ezingaphezulu, imiqamelo, okanye izinto zokulala kwigumbi elingaphantsi, zigcine ngaphakathi kweebhegi ezifakwe uziphu abazifakileyo okanye bazisonge ngokucocekileyo ngaphakathi emigqomeni engangeni moya.
4. Iingcamango zoGcino lweShelf
Ukugcina ishelfu kugcinwa kwiindidi phantse ezingenamda. Olona hlobo luhle lokugcina ishelfu luya kwahluka kwindlu ngendlu, njengoko izinto ezininzi zidlala indima xa kuchazwa izimvo zokugcina. Umthi, isinyithi, iplastiki, kunye nezinto ezidityanisiweyo zezinye zezinto ezikhethiweyo zokugcina iishelfu kwigumbi elingaphantsi. Ubungakanani beeshelfu zakho buya kuxhomekeka ekubeni unamagumbi angakanani kwaye kufuneka ugcine malini.
Umthombo: @reorgproject nge-Instagram
Umthombo: @ukusebenza kombuthobyheidi nge-Instagram
Umthombo: @serenityathomedetroit nge-Instagram
Umthombo: @newyorkerathome nge-Instagram
Umthombo: @organizeandstyle nge-Instagram
Umthombo: @tidying_by_tash nge-Instagram
Umthombo: @hellosort_ nge-Instagram
Umthombo: @i_want_something_more nge-Instagram
Umthombo: @goodorderdc nge-Instagram
Umthombo: @simplyorganizedkj nge-Instagram
Umthombo: @ shianne.barton22 nge-Instagram
Ungonga imali ngokwakha ishelufu elula endaweni yokuthenga iivenkile ezishelfini esele zenziwe. Linganisa igumbi olibekele bucala kwigumbi elingaphantsi, kwaye usebenzise ipayini kunye neplywood engabizi kakhulu ukwakha ishelfu esisiseko. Le yenye yezona mbono zitshiphu zingaphantsi kwaye zinokulinganiswa ngokwesiko ukuze zilungele iimfuno zakho.
Ukuba indawo yakho yokugcina yangaphantsi incinci, jonga ekufakweni kweshelufu yokubeka isilingi. Ezi shelufu zomeleleyo zikuvumela ukuba ugcine imithwalo, izinto ezipholileyo, izihombiso zeholide, nangaphezulu nangaphandle kwendlela. Iishelufa zokudada ngaphezulu kwentloko yakho zisebenzisa indawo oza kuyimosha. Jonga ukuba yintoni ebandakanyekileyo ekuxhomeni kwii-racks zakho eziphezulu:
5. Iingcamango zangasese zewayini ezingaphantsi
Indawo epholileyo, emnyama yendawo ephantsi komhlaba iyenza ibe yindawo efanelekileyo yokwakha isisele sewayini . Ngokufanelekileyo, indawo yokugcina iwayini kufuneka ihlale kubushushu obuzinzileyo, ngokukhanya okuphantsi kwaye kungangcangcazeliswa. Apha ngezantsi kwebakala yeyona ndawo ilula ukulawula ukukhanya, ukufuma, kunye namaqondo obushushu afunekayo ekuguqulweni kwewayini efanelekileyo.
Iqela lomtshato imibono ye tattoo kuye
Nje ukuba uchonge indawo engaphantsi kweglasi engaphantsi komhlaba, funda ubushushu kunye nezithintelo zomphunga ozifunayo. Nangona amagumbi angaphantsi ahlala epholile, indawo yokugcina iwayini ihlala ifuna inkqubo yokupholisa. Jonga indawo yakho yeengcali zoyilo lwesela ekuncedeni ukuba wenze igumbi lokugcina iwayini, okanye ubukele le vidiyo ngemibono:
Ukuba unendawo eyaneleyo engaphantsi, ungadibanisa itafile yokunambitha iwayini kunye nezitulo kwigumbi lakho lewayini. Ukuba akunjalo, cinga ukongeza igumbi lokungcamla kufutshane. Indawo engasetyenziswanga phantsi kwezinyuko yindawo elungileyo yokwakha isela encinci yewayini. Yakha iityhubhu zomthi kunye neshelfu yokubamba iibhotile zakho zewayini, emva koko wongeze ukukhanya kunye neengcango zeglasi zefestile.
Ukugcina ii-FAQs ezingaphantsi
Zeziphi iingcebiso endinokuzilandela ukuqinisekisa ukuba ukutya okungxamisekileyo kokutya okungafunekiyo akonakalisi ngaphambi kokuba ndikusebenzise?
Ukulandela ezi ngcebiso zokugcina ukutya okukusezantsi kunokunceda imilinganiselo yakho engxamisekileyo ihlale ixesha elide:
Xa ugcina ukutya okupakishiweyo kwigumbi elingaphantsi, soloko ususa ikhadibhodi okanye izinto zokupakisha zephepha. Banokufumana ukungunda kumgangatho ongaphantsi ofumileyo ngokukhawuleza.
Gcina yonke into kwindawo yokupakisha engangeni okanye engenanto.
Gcina iziqhamo nemifuno ephelelwe ngamanzi emzimbeni kwiiglasi ezitywiniweyo.
Qinisekisa ukuba izikhongozeli zeplastiki kunye namabhakethi anetywina gasket.
Bhala umhla wokugcina kunye nomhla wokuphela kwento nganye.
Jikelezisa izinto ezinamathanga nezinokutshabalala, kwaye uzisebenzise ngaphambi kokuba ziphelelwe lixesha.
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokugcina izixhobo kwigumbi lokusebenzela elingaphantsi?
Ngelixa iphegibhodi elungiswe kakuhle yeyona ndlela ixhaphakileyo yokugcina izixhobo zomasifundisane, igumbi elingaphantsi elifumileyo linokubangela izixhobo zentsimbi ukuba zivele umhlwa ngokukhawuleza. Ukuba kufuneka uxhome izixhobo kwibhodi yephegbhodi, bakhusele ngengubo yeoyile yomatshini. Oku kuya kubanceda baphindise ukufuma. Ukugcina izixhobo ezifanelekileyo kwigumbi elingaphantsi, zibeke kwibhokisi yezixhobo etywinwe kakuhle.
ngaba ucebisa umculi we tattoo
ezemidlalo indoda umqolomba izimvo kuhlahlo-lwabiwo mali